Tsikoninkonina amin’ny fiainam-pirenena ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Les jeunes sont encouragés à développer leur potentiel à travers l'initiative régionale il y a 7 jours
Tsikoninkonina amin’ny fiainam-pirenena !
P.Prospère il y a 3 mois
Indro atolotra antsika etoana ny matoan-dahatsoratra norenesintsika tao amin'ny Feon'i Lakroa ny talata 24 aogositra teo.
Kilalaon’ankizy ny tsikonina. Kisarisarin’ny fiainana an-tokantrano, fa kisarisarin’ny fiainan’ny olon-dehibe entina eny antokotany. Manao nahandro amin’ny vilany kely, dia miara-mihinana. Ny vilany no kely, fa ny nahandro dia tena fihinana tokoa. Toy ny hoe, manao vary be menaka. Mifanasa ny mpiara-monina… Toy ny hiran’ny Levelo fahiny e ! « Tsikonikonina andavanandro, tsisy tsy vitany an-kilalao ; ny kivadivady aza mbola ataony ».
Ny resabe manodidina ny fananganana governemanta farany teo dia toy ny resaka tsikonina. Entina eny an-kianja ny fiainam-pirenena, dia voatsikafona eny daholo ny fiainan’olon-dehibe, eny hatramin’ny kivadivady. Niala tamin’ny minisitra be diplaoma sy nafarana avy any an-dafy, dia niditra amin’ny minisitra nafarana teny an-kianja. « Tsy ny lasany no nifidianako azy, hoy ny filoha, fa izy olon’ny terrain ». Teny an-kianja no nifankahita, ka dia nifankahita fomba fiasa sy fahombiazana. Tsy tsikononkonona teny an-kianja fahiny anefa ny fiainam-pirenena ka hanaovana kisarisarin’ny fiainana andavanandro, fa mitaky fomba fiasa mahomby.
Ny manahirana amin’ny fanaovana politika ankehitriny dia very ny kolontsaina manandratra ny firenena sy tanindrazana. Tokotany kely no filalaovana ny politikan’ny tsikonina, hany ka mitsikafona eny an-kianja ny fiainana an-davanandro. Dia manjary very ny kolo-tsaina repoblikanina te hametraka fanjakam-bahoaka. Very ny soatoaviny te hanandratra ny maha olona satria ny olona heverina ho ambony no viravirain’ny kijanam-bahoaka. Anisan’ny mampiroborobo ny kisary lalaovina amin’ny tsikonina ny tsy fahafehezana ny rafi-pitondrana repoblikanina miorina amin’ny lalàna. Tsy amboaran-tsoratra voarakitra an-taratasy manko ny lalàna, fa fomba enti-mandrindra sy mametraka rafi-pandaminana sy fitantanana fiaraha-miaina sy fomba fiasa. Ny olombelona no maha lalàna ny lalàna, noho izany, mirakitra toe-panahin’olombelona ny lalàna.
Rehefa ny lalàna no tsy voahaja na rehefa mivilana ny fampiharana lalàna dia ny fiainan’olombelona no voavoravira. Mikorosy fahana ny kolontsaina repoblikanina satria mifangaro ny lapa sy ny kijana. Zary lapa fanapahana hevitra ny kianja. Very hasina miandalana ny rafitra repobikanina satria tsy entanin’ny fitiavana hanompo ny fahazoana fahefana. Fanambin’ny mpitondra ny hanova ny tantara. Tsy fanovana ho an’ny fanovana anefa, fa fanovana ho amin’ny tsaratsara kokoa, ialana amin’ny hoe « Aleo ihany ny taloha. C’était mieux avant ».
Mbola misy zanaky ny repoblika ve ny mpitondra ankehitriny ? Ny olona resy lahatra amin’ny soatoavina repoblikanina ihany manko no afaka mampandroso firenena satria mahatsapa fa zava-kanto ny politika. Fahamendrehana ny kisarisary ny zava-kanto fa tsy tsikonina eny an-kianja. Toy ny olona mikirakira hairaha manko ny fifehezana ny lalàna, ny demokrasia, ny fanjakana lahika, ny idealy repoblikanina. Mitaky finoana koa izany mba tsy hironana amin’ny sampy tsy nikolo fanahy.
Fony nandray fahefana ny filoha Rajoelina dia nilaza fa : « tsy izao zava-misy izao no hanarenana ny firenena sy ny fiainan’ny Malagasy ». Inoana fa tsy izao zava-misy izao izany. Mila hairaha ny fametrahana fanjakana tsara tantana sy tan-dalàna. Mila hairaha ny fanovana fiaraha-monina anjakan’ny gaboraraka. Mila hairaha ny fametrahana ny fanjakana demokratika. Mila hairaha ny idealin’ny firaisam-pirenena tsy ho ravan’ny tombontsoan’olom-bitsy, feno fitiavan-tena.
Matoan-dahatsoratra : Ny teny no tsy atao be… ! - il y a 2 mois
Matoan-dahatsoratra : Tsikoninkonina amin’ny fiainam-pirenena ! - il y a 3 mois